नेकपाले टुंग्यायो जनवर्गीय संगठनको भागबन्डाः संयोजक र सहसंयोजक तोकिए, कुन काे कस्ले पायाे जिम्मा ?::mirmireonline.com
नेकपाले टुंग्यायो जनवर्गीय संगठनको भागबन्डाः संयोजक र सहसंयोजक तोकिए, कुन काे कस्ले पायाे जिम्मा ?
काठमाडौं, २ जेठ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनवर्गीय संगठनको भागबन्डा टुंग्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागवण्डाका आधारमा अधिकांश जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक तोकेको हो ।
बैठकले विद्यार्थीको जिम्मा अनेरास्ववियुका तत्कालीन महासचिव ऐन महरलाई दिने निर्णय गरेको छ। भने सहसंयोजकमा रञ्जित तामाङ तोकिएका छन् । महरलाई प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीकै जोडबलमा संयोजक बनाइएको स्राेतले जनाएकाे छ । यस्तै सहसंयोजक तोकिएका रञ्जित पुर्व माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हुन् । यदि उनी सहसंयोजक बन्न तयार नभए सुरेन्द्र बस्नेतलाई बनाउने सहमतिसमेत भएको स्रोतको दाबी छ ।
मजदुर संगठनको जिम्मा जिफन्टका विनोद श्रेष्ठ र सहसंयोजकमा जगत सिम्खडा तोकिएका छन् । युवा संगठनको नेतृत्वमा तत्कालिन योङ कम्युनिस्ट लिगका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटालाई दिने निर्णय भएको छ। रमेश पौडेललाइ सहसंयोजक तोकिएको छ । दीपशिखालाई युवा संयोजक बनाउन ओली तयार भइनसकेकाले छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यस्तै महिला संगठनको नेतृत्व अमृता थापामागर र सहसंयोजक सीता पौडेल तथा पत्रकारको जिम्मा महेश्वर दाहाल रगणेश बस्नेत सहसंयोजक, तथा बुद्धिजिवीतर्फ डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा संयोजक र कृष्ण केसी उपसंयोजक तोकिएका छन् ।
यस्तै पेशागत महासंघमा विश्वनाथ प्याकुरेल संयोजक र दयाराम बस्याल सहसंयोजक तथा जनसांस्कृतिक महासंघमा खगेन्द्र राई संयोजक र सरल सहायात्री सहसंयोजक तोकिएका छन् । यसैगरी मुस्लिम संगठनमा सराज महमद फरुकी संयोजक र अत्तहर हुसेन फारुकी सहसंयोजक तथा दलितमा तिलक परियार संयोजक र ओमबहादुर विश्वकर्मा सहसंयोजक तोकिएका छन् । यस्तै भूपू सुरक्षाकर्मीको संगठनमा धनबहादुर चन्द संयोजक तोकिएका छन् भने सहसंयोजक तोकिएको छैन ।